Maxkamadda Boosaaso oo xukun dilka ah ku ridday labo nin oo midkood ku eedaysnaa in uu dilay xildhibaan ka tirsan Baarlamaank Puntland. – Radio Daljir
Janaayo 23, 2010 12:00 b 0
Bossaso, Jan 24 – Maxkamadda darajada 1-aad ee gobolka Bari ayaa la horgeeyey laba dhagar-qabe oo ku eedaysnaa in ay dileen labo nin oo mid ka mid ah uu ahaa xildhibaan ka tirsanaa golaha wakiilada Puntland halka midka kalana uu ahaa askari ka tirsan ciidan Puntland.
Labada eedaysane oo midkood uu ahaa Ethobain halka mid kalana uu ahaa Soomaali, ayaa markii ay maxkamaddu dhagasysatay dacwaddii iyo danbiyadii loo haystay waxay ku xukuntay dil toogasho ah, kuwaasi oo sida maxkamaddu sheegtay meel fagaare ah lagu toogan doono.
C/fitaax Axmed Daahir, ayaa ku eedaysanaa in uu dilay xildhabaan C/llaahi Cali Kaarad oo ka tirsanaa xildhibaannada baarlamaanka Puntland, kaasi oo 5-tii bishaan lagu toogtay magaalada Boosaaso, ahaana xidlhibaan laga soo doorto gobolka Bari, waxaana ay maxakamaddu ay c/fitaax Axmed Daahir ku xukuntay dil toogasho ah.
Eedaysanaha kale ee ay maanta maxkamaddu ku ridday xukunka dilka ah, ayaa lagu magacaabaa Asmara Hayla Gabra kaasi oo ah nin Ethobian ah, wuxuuna toorray dhawaan ku dilay askari ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso, isagoo sidoo kalana dhaawacay askari kale oo ay wada socdeen midkii la dilay, waxaana ninkaasna maxkamaddu ay ku xukuntay dil toogasho ah.
Guddoomiyaha maxakamadda darajada 1-aad ee gobolka Bari C/risaaq Xaaji Aadan oo markii uu xukunku dhacay la hadlay saxaafadda ayaa sheegay maxkamaddu xukunnada raggaasi in ay u cuskatay qodobbo islaami ah kadib markii ay caddaatay in ay galeen danbiyada loo haystay.
Puntland waxay dhawaan sheegtay in ay maxkamad soo taagi doonto dhammaan eedaysanayaasha loo hayo dilalkii qorshaysnaa ee ka dhacay deegaannada Puntaland sanadkaan cusub iyo midkii la soo dhaafay, waxaana kuwaan maanta ay noqonayaan eedaysanayaashii 1-aad ee loo qabtay dilalkii madaxda oo si rasmi ah maxkamad loo soo taago.